भारतीय राजदुत रञ्जित रेले यसरी नचाए गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई – YesKathmandu.com
शुक्रबार १४, माघ २०७३
बाँडिएको सबै कार्डमा लेखिएको थियो,प्रमुख अतिथी रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड । तर कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्य गरिरहेको थिए गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले । यस्तै उराठ लाग्दो दृश्य देख्न पाइयो हिजो सोल्टी होटलमा । भारतको स्तन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल भारत मैत्री संघद्धारा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसका दुई मन्त्रीलई जुधाउने काम भारतीय राजदुत रञ्जित रेले गरेका हुन ।
भारतीय दूतावासका राजदुत रन्जित रेको साथमा गरेको कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री वालकृष्ण खाडलाई प्रमुख अतिथि बनाउने निधो भयो र निम्तो कार्डहरु पनि बाँडिएको थियो । तर, भारतीय दूतावासले उप प्रधानमन्त्री एबं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु पर्ने कुरा गरेपछि अकस्मात निधिसँग सम्पर्क गरियो ।
निधि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पश्चिम पोखराको भ्रमणमा हिडेका थिए । त्यहाँ आयोजित सशस्त्रको पार्टी छाडेर लगत्तै हेलिकप्टरबाट राजधानी उत्रिए र बिना सुरक्षा होटल सोल्टी पुगेर प्रमुख अतिथिको आसनमा बिराजमान भए ।
प्रमुख अतिथि बनेर सोल्टी पुगेका रक्षा मन्त्री त्यतिबेला जिल्लाराम परे, जब निधि प्रमुख अतिथिको सिटमा बसिसकेका थिए ।
अपमान गर्नु, यति ठूलो अपमान त नगर्नु नि । दुबै कांग्रेसी हुन् । खाँड सभापति देउवाका हनुमान हुन्, विमलेन्द्र निधि भारतका हनुमान ,यस्तै चर्चा चल्यो कार्यक्रम स्थलमा ।
भारतीय दूतावासको कार्यक्रममा भारतकै हनुमानको चल्नु स्वभाविक हो र कांग्रेस कांग्रेसलाई जुधाएर भारतीय राजदूत रंजित रेले कांग्रेसी भनेका आफ्नै कठपुतली हुन् भन्ने हिसावले नचाइदियो । खाडलाई खगारे विमलेन्द्र निधिले ।
नाच नाच बाँदरहरु ,
Bloody Indian ambassador
कांग्रेसले आफ्नो नांगो चरित्र देखाई सक्यो । ०६२/६३ मा गिरिजाले व्रिफकेश सिटौलालाई वोकाएर नेपालीको सार्वभौम रअ लाई वुझाए । ऐले देऊवाले गोवा सम्मेलनमा विदेशनीति भारतलाई वुझाए ! यस्ता पत्रूहरू नेपाल र नेपाली कांग्रेस होईनन् ! हुन् सोनीया कांग्रेस ??? कांग्रेस भन्न धिन लाग्नथाल्यो हामीलाई ????
ओलीलाई बुबा भन्दै को हुन् भाँडभैलो मच्चाउने ?
नेविसंघमा कर्णालीकै पहिलो महिला केन्द्रीय सदस्य – समिता
२३ हजार मतान्तरका साथ चुनाव हार्दै कृष्णप्रसाद सिटौला
तिवारी हत्याकाण्डमा सरकारले नक्कली हत्यारा खडा गरयो
राजन भट्टराई गगनलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगे तर भेट्न पाएनन्
राजपालाई चुनावमा ल्याउने सरकारको प्रयास असफल
मतगणना सुरु नहुँदै बझाङमा एमाले माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप